"म बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउछु ।" -शमशेर लामा
शमशेर लामा,पूर्बी चितवन स्थित राप्ती नगरपालिकाका वडा न. ४ का वडा अध्यक्ष हुन। युवा संघ नेपाल, क्षेत्र न.१ का संयोजक समेत रहेका लामा उमेरले भर्खरै ३० टेकेका जोश जागर अनि उत्साह उमंग बोकेका जुझारु युवा नेता हुन। २०६४ सालमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका लामाले एक दशकको अन्तरालमा ठूलै छलाङ मार्न सफल भएका हुन। स्थानीय तहको निर्बाचनमा उनले नेपाली काङ्ग्रेसका राजकुमार सेढाई लाई ३१८ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए। लामाको मत ११६५ र सेढाईको मत ८४७ रहेको थियो।राप्ती नगरपालिकाको कार्ययोजना र वडा न. ४ को समग्र बिकासको सन्दर्भमा कालिका एफएमका मनोज पन्तले गर्नु भएको कुराकानी ।
स्वागत छ शमशेर जि।
- धन्यवाद ।
सबै भन्दा ढिलै भए पनि हार्दिक बधाई ।
-धेरै धेरै धन्यवाद
तपाईको वार्डमा अहिले बिकास निर्माणका कार्य के भैरहेको छ?
-स्थानीय तहको निर्वाचन पछि बधाई अनि सम्मान ग्रहण र मतदाताहरुको घर घरमा जाने कार्यक्रममा ब्यस्त हुनु पर्‍यो । अहिले प्रत्येक वडाको लागि बजेट छुट्ट्याए पछि कामको पनि शुरुवात भैसकेको छ। शुरुमा हामीले वडा न. ४ को डडुवाको रेड्क्रस चोक देखि गैडाढाप सम्मको बाटो ७८१ मीटर पिच गर्ने काम सम्पन्न गर्न सफल भयौं । वडा कार्यालय को निर्माण कार्यको शुभारम्भ भैसकेको छ।शिखर हरियाली इको टुरिजम पार्कको काम पनि शुरु हुदैछ। बिकास निर्माण का कामले बिस्तारै गति लिदैछ।
समग्र राप्ती नगरपालिकामा के के काम भैरहेको छ नि?
-हाम्रो राप्ती नगरपालिका का प्रमुख प्रभा बराल र उप- प्रमुख इमानसिङ लामाज्युहरुले यस नगरलाई बिकास गर्ने उदेश्यले निकै नै सुन्दर कार्यहरुको योजना निर्माण गर्नु भएको छ। सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयारी भैसकेको छ।प्रथम नगर सभा कार्यक्रमको सफलता पछि सडक निर्माणका कामहरु तीब्र गतिमा भैरहेको छ। विभिन्न उपलब्धिमूलक तालिमहरुको आयोजना गरि सकिएको छ। विभिन्न वडाहरुमा पनि काम सुरु भैसकेको छ।राप्ती नगरमा पर्ने राजमार्गमा सरसफाइ र ढल निर्माणको काम पनि हुदैछ ।अन्य धेरै योजनाहरु पनि अगाडि बढदैछ।
वडा कार्यालयको ब्यबस्थापन नहुदा कुनै कठिनाइ छ कि छैन?
-स्वाभाविक रुपमा काम गर्न वडा अध्यक्षहरुलाई केही गाह्रो त छ। तथापि वडाका कामहरुमा कुनै अवरोध सृजना चाहिँ भएको छैन। काम सुचारुरुपमा अगाडि बढी रहेको छ। अहिले हामी १३ वटा वार्डका वडा अध्यक्षहरु नगर पालिकामा नै कार्यकक्ष बाट काम गर्दैछौ। वडा वडामा भवन निर्माणको काम पनि हुँदै छ।नगर पालिकामा नै सबै वडा अध्यक्षहरु एकै ठाउँमा रहदा आ- आफ्नो वडाको गतिविधि बारे जानकारी र बिचार आदान प्रदान हुँदा कामलाई अगाडि बढाउन पनि सजिलो भएको छ।
तपाईंको वडामा तपाइँको पार्टीको तर्फबाट वडा अध्यक्ष पद मा कति जनाले आकांक्षा राखेका थिए,ती व्यक्तिहरुबाट निर्वाचन ताका सहयोग पाउनु भयो कि भएन?
-वडा अध्यक्ष पदको लागि मेरो वाडमा नेकपा एमालेको तर्फ बाट१३ जनाले इच्छा प्रकट गर्नु भएको थियो। टिकट मैले प्राप्त गर्न सफल भए ।यद्यपि वहाँहरु सबैलाई साथै लिएर अगाडि बढे। कोहि साथीहरु रुष्ट हुनु भएन।सबैले सहयोग गर्नु भयो।वहाँहरु लगायत मेरो वडाका मतदाताहरुले नै मलाई बिजयको माला पहिर्याउनु भएको हो। सबैसंग सहकार्य अगाडि बढी रहेको छु। म वहाँहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु।
आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ योजना पनि बनाउनु भएको छ कि?
-जन लहर अनुरुप स्मार्ट सिटीको जुन अवधारणा छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछु। खहरे खोलाको तटबन्धको काम हुदैछ । सुबिधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना,अतिथी हरुको लागि आवासको सुबिधा,मेरो वाडमा पानीको मुहान भएको कारण पुरै राप्ती नगरका बासिन्दालाई खानेपानी बितरणको काम गर्नेछु। पाँच वर्ष भित्रमा मेरो वडा सहित हाम्रो नगरको मुहार फेर्नुछ। गर्नु पर्ने कामहरु धेरै छ्न, बोलेर भन्दा पनि अहिले गरेर देखाउने बेला हो। तसर्थ, म बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउछु।
काम गर्दा आफ्नो पार्टीका मान्छेहरुका हितका लागि मात्र गर्ने भन्ने कुरा सुनिन्छ। तपाईं त त्यसो गर्नु हुन्न नि?
- म अहिले पार्टीको भन्दा पनि राज्यको प्रतिनिधि हु। मैले आफ्नो काम,कर्तव्य अनि अधिकार अनुसार काम गर्नु पर्छ।पार्टी भन्दा पनि माथी रहेर काम गरेर देखाउने बेला छ। सबै लाई समेटेर अगाडि बढने मेरो लक्ष्य छ।यस किसिमको गुनासो म आउन दिने छैन।
यदि निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको भए तपाई के गर्नु हुन्थ्यो?
-चुनावी मैदानमा उत्रिए पछि जीत या हार हुने स्वभाविक कुरा हो। तर मलाइ जित हासिल गर्छु भन्ने पूर्ण आत्मबिश्वास थियो र जीत हासिल गरे पनि। यदि पराजित भएको भए म आफ्नै पार्टीको जिम्मेवारी अनुसारको काम अनि मेरो रुचिको समाज सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशिल हुने थिए । हतास र निरास चाहिँ हुने थिइन।
अन्त्यमा केहि भन्न चाहनु हुन्छ कि?
-सबै भन्दा पहिला तपाईलाई धन्यवाद ।कालिका एफएम परिवारलाई पनि धन्यवाद । समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा जुटौ,रास्ट्रको बिकास गरौ। यहि नै भन्न चाहन्छु ।धन्यवाद ।